06 | May | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Analysing the criminal military dictators dirty tactics to continue ruling Myanmar
May 6, 2017 drkokogyi
“အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”ထဲမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပါဝင်နေသလဲဆိုတာ စူးစမ်း ကြည့်လိုက်တော့ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ”ပါတယ်၊ “သီပေါမင်းအုတ်ဂူကို သွားကန်တော့” တာပါတယ်။ သီတဂူဆရာတော်ရဲ့ “၄ ချောင်း ထောက်ဒေသနာ” ပါတယ်။ သင်္ကန်းဝတ် ဝီရသူရဲ့ “တိတ်ပိတ်တရား” ပါတယ်။ “အောင်ဝင်းဇော်၊ အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုး” တို့လို (DSA) ကျောင်းဆင်းဟောင်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေရဲ့“အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု”ပါတယ်။ “ကောလဟလမျိုးစုံ” ဖန်တီးထုတ်လွှင့် နေမှုတွေဟာ ဇာတ်တိုက်ထားသလို၊ အကွက်ချစီစဉ်ထားသလို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
May 6, 2017 May 6, 2017 drkokogyi
Even Daw Suu could not becomeaPresident and could not control Home Ministry, Military, Police, Htway Oaks asareal Government leader. And she is the only head of the government in the world without getting security guards
Yes Maung Maung,
Even Daw Suu could not becomeaPresident and could not control Home Ministry, Military, Police, Htway Oaks asareal Government leader.
And she is the only head of the government in the world without getting security guards.
Even the prisoner leaders have the permission to arrange for their body guards!
SHAME TO YOU MIN AUNG HLAING LED Myanmar Tatmadaw……
Maung Maung wrote>>>
နေပါဦး…မေးပါရစေဦး……တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအမည် တမျိုးအမည် ခံယူ
21st. Century Myanmar-Narzi Concentration Camps ၂၁ ရာစု ခေတ်၊ မြန်မာပြည်မှ နာဇီ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းရေး စခန်းများ
M-Media addedanew video: ၂၁ ရာစု ခေတ်၊ မြန်မာပြည်မှ နာဇီ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းရေး စခန်းများ.
၂၁ ရာစု ခေတ်၊ မြန်မာပြည်မှ နာဇီ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းရေး စခန်းများ
(နီကိုလပ်စ် ခရစ္စတော့ဖ် တင်ဆက်သည်)
New York Times မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
WE ALL NEED TO BE UNITED asaMuslim Group in Myanmar whether they recognize or not. we should not use our Indian-Myanmar Muslims and Rohingya friends as sacrificial lambs to get political mileage and full recognition as Ethnic Race of Myanmar
Yes …UR right. Although we, Myanmar Muslims had adopted most of the Myanmar cultures:language, food, clothing we should not use our Indian-Myanmar Muslims and Rohingya friends as sacrificial lambs to get political mileage and full recognition as Ethnic Race of Myanmar. Beard or not, burkha or not, Tike-pone and Lae Gadone Shirt or not….We, Muslims Myanmar must be united as BROTHERS and SISTERS-IN-ISLAM. If we could not agree on name to be adopted, we need to be united as Muslims in Myanmar. Don’t scare the stupid NLD, USDP and Military criminals dislike of the name of Muslims. WE ALL NEED TO BE UNITED asaMuslim Group in Myanmar whether they recognize or not.
ကျနော် သဘောထားကတော့
ကျနော်တို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်…
ကျနော်တို့ အပြည့်အဝ ရ ရမယ်